Kukho isidingo esingathethekiyo sokufaka ii-SNF ngezixhobo ezininzi, kungekuphela nje ngezixhobo ezikhuselayo, kodwa nakwizibonelelo ezibalulekileyo zothintelo losulelo kunye nabasebenzi.
Ukusukela oko kwaqala ubhubhane we-SARS-CoV-2 / COVID-19 e-United States, sikwazile ngokubanzi ukuba semngciphekweni kwezinye izigulana. Kwangoko, amaziko abongikazi abanezakhono kunye nolunye ulondolozo lwexesha elide baqala ukubonisa amandla okuhambisa usulelo lwentsholongwane.
Ukusuka kuthintelo lwezixhobo kuthintelo losulelo kubantu abasesichengeni sezigulana kwaye bahlala abasebenzi betyhafile, le mimandla ibonakalise isithembiso sesi sifo ukuba sibambe. Ngelixa besisazi ukuba le iya kuba yindawo ebuthathaka, bangaphi abosuleleke ngokwenene? Kwiintsuku zokuqala kokuqhambuka, uvavanyo lwenziwa kuphela kwabo baneempawu, kodwa njengoko izixhobo ziye zanda, kunjalo ke nokufumaneka kovavanyo. Uphononongo olutsha oluvela kumaZiko oLawulo lweZifo noThintelo lweNgxelo yeVeki yokufa nokufa (i-MMWR) kuvavanye ukwanda kwe-COVID-19 eDetroit kwizibonelelo zabongikazi (SNFs) ukusukela ngoMatshi ukuya ngoMeyi walo nyaka.
Sebenzisa isaveyi yokuxhaphaka kwenqaku apho kuvavanywa bonke abasebenzi nabahlali ngaphandle kweempawu, bafumanise amanani akhathazayo kumashumi amabini anesithandathu e-SNFs zaseDetroit. Uvavanyo lwenzekile kumaziko amaninzi ngokusekwe kubaluleko lwangaphambili kwaye lwenziwa ngokudibeneyo nesebe lezempilo lesixeko. Ngaphaya koko, abaphandi benze uvavanyo lokuthintela ukosuleleka kunye nokubonisana- “Uvavanyo lwe-IPC olulandelayo lwenziwe kumaziko ali-12 athatha inxaxheba kuvavanyo lwesibini kwaye kuqukwa novavanyo lokuziphatha kwabantu abathandanayo besebenzisa isiseko somgangatho, unikezelo kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zokuzikhusela, isandla iinkqubo zempilo, ucwangciso lokunciphisa abasebenzi, kunye neminye imisebenzi ye-IPC. ”
Isebe lezempilo lendawo lincedise ekuqokeleleni ulwazi ngeziphumo ezincumisayo, ubume beempawu, ukulaliswa esibhedlele, kunye nokusweleka kwabantu. Ekugqibeleni, abaphandi bafumanise ukuba ukusukela nge-7 kaMatshi ukuya nge-8 kaMeyi, i-44% yabemi be-Detroit SNF abangama-2,773 bafunyanwa benethemba le-SARS-CoV-2 / COVID-19. Iminyaka yobudala kwabo bahlali baneminyaka engama-72 kwaye i-37% iphele ifuna ukulaliswa esibhedlele. Ngelishwa, iipesenti ezingama-24 zabo bavavanywe benesifo, basweleka. Ababhali baqaphele ukuba “Phakathi kwezigulana ezingama-566 ze-COVID-19 ezichaze iimpawu, ezingama-227 (40%) zasweleka zingaphelanga iintsuku ezingama-21 zovavanyo, xa kuthelekiswa nama-25 (5%) phakathi kwezigulana ezingama-461 ezingakhange zichaze zimpawu; Kusweleke ama-35 (19%) kwizigulana ezili-180 ezazingaziwa ukuba zinjani. ”
Kwizibonelelo ze-12 ezithathe inxaxheba kuvavanyo lokuxhaphaka kwenqaku lesibini, ezisibhozo ziye zanyanzelisa ukudibana kwezigulana ezilungileyo kwiindawo ezinikezelweyo ngaphambi kovavanyo. Uninzi lwamancedo lwalunobalo lwabantu abaguli abangama-80 kwaye kwabo bavavanywa ngexesha lophando lwesibini, i-18% yaba neziphumo ezincumisayo kwaye yayingaziwa ukuba inethemba. Njengoko ababhali beqaphela, olu phononongo lubonisa ubungozi baba bantu banesigulana kunye nenqanaba eliphezulu lokuhlaselwa. Kuzo zonke ii-SNFs ezingama-26, bekukho ukuhlaselwa okupheleleyo kwe-44% kunye nenqanaba lokulaliswa esibhedlele elinxulumene ne-COVID-19 ye-37%. La manani ayothusa kwaye akhomba kwimfuno eqhubekayo yokufunyanwa kwangoko, iinzame zokuthintela usulelo, ukudibana, kunye nokusebenzisana namasebe ezempilo oluntu. Kukho isidingo esingathethekiyo sokufaka ii-SNF ngezixhobo ezininzi, kungekuphela nje ngezixhobo ezikhuselayo, kodwa nakwizibonelelo ezibalulekileyo zothintelo losulelo kunye nabasebenzi. Njengokuba le yimeko yokuba sesichengeni, inkxaso eqhubekekayo ayizukufuneka nje kubude besi sifo kodwa nasemva koko.